Lego 71031 Marvel စတူဒီယို Minifigures ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 590 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
ပထမဆုံး Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား series တွေရောက်လာပါပြီ 71031 Marvel စတူဒီယိုဒါပေမယ့်ဒီစူပါဟီးရိုးဇာတ်ကောင်တွေရဲ့စုဆောင်းမှုတွေကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်လောကစကြဝာရဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့ကိုက်ညီနိုင်ပါ့မလား။
71031 Marvel စတူဒီယို franchise နှင့် the ပရိတ်သတ်များစွာအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည် Lego ကုမ္ပဏီ၏အသေးစိတ် minifigures များသည်၎င်း၏ superhero themes များတစ်ဝက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လက်ခံသည်နှင့်အမျှ Group သည်။
မျှော်လင့်ချက်များနေရာတွင် MCU မှနောက်ဆုံးလွှင့်စီးရီးကိုရှာဖွေနေသောအက္ခရာ ၁၂ လုံးနှင့်အတူငါတို့အပြည့်အ ၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရင်းထိုင်ပါ။ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား - ဒါပေမယ့် WandaVision, Falcon နှင့် Winter Soldier, Loki နှင့် What If တို့အတွက် spoilers များရှိနေကြောင်းသတိပေးပါ။
theme: စုဆောင်းထားသောအသေးစား အမည်သတ်မှတ်မည် - 71031 Marvel စတူဒီယို ဖြန့်ချိ: စက်တင်ဘာလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 3.49 / $ 4.99 / € 3.99 အပိုင်းပိုင်း: ပွောငျးလဲတတျသော အသေးစားပုံများ: အထုပ်နှုန်း 1, စုဆောင်းရန် 12
Lego: စက်တင်ဘာလ 1, 2021
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော 71031 Marvel စတူဒီယို မှတ်မိနိုင်သော Scarlet Witch မှ Captain C ကဲ့သို့ချစ်သောသူရဲကောင်းများ၏အခြားဗားရှင်းများအထိဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူရှိသည်။arter ဟိ Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား ၎င်းတို့သည်အသေးစိတ်အာရုံစိုက်မှုကြောင့်လူသိများပြီးနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကဲ့သို့အလားအလာကောင်းများရှိသည် Marvel အထူးသဖြင့်အလားတူ franchise ၇၁၀၂၆ နှင့်တူညီသောကုသမှုကိုခံယူပြီးနောက်ထိုတူညီသောအာရုံစိုက်မှုကိုခံရသည် DC စူပါဟီးရိုးများသည်အနည်းဆုံးပြောရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
များစွာသောပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အပိုင်းသစ်များစွာကိုငါတို့မျှော်လင့်လာသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော ၁၁ နှစ်ကဆောင်ပုဒ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဟောင်းနှင့်အသစ် ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည် Marvel superheroes တွေရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ 71031 Marvel စတူဒီယို အခြားမျက်မမြင်အိတ်စွပ်စီးရီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစျေးနှုန်း
WandaVision မှ Hailing, Wanda Maximoff သည်သူမ၏ကံကြမ္မာကိုပစ္စုပ္ပန်စီးရီး၏နောက်ဆုံးနိမိတ်ပုံမှော်ဆန်သောအနီရောင်ခေါင်းစီးပါ ၀ င်သောသူမ၏ကိုယ်ပိုင်မှော်မှပြုလုပ်ထားသောဝတ်စုံအသစ်ကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။
စတင်မိတ်ဆက်သော minifigure 71031 Marvel စတူဒီယို အလိုရှိသောအရာသည်ဤ ၀ တ်စုံကိုပုံဖော်သည် Lego ယနေ့အထိဇာတ်ကောင်ဗားရှင်း ဤဇာတ်ကောင်၌ပါ ၀ င်သောအသေးစိတ်သည်ပုံစံခွက်နှစ်ခုမှလက်နက်များသည်ဆံပင်အုတ်အသစ်သို့ဆန့်ကာ The Scarlet Witch ၏မည်သည့် minifigure ကိုမဆိုကျော်လွန်သွားသည်။
အပိုမျက်နှာတစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးသူမ၏အစွမ်းထက်မှော်ကိုထိန်းချုပ်သည့်အခါအနီရောင်မျက်လုံးများကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ထို arcana ကိုပွင့်လင်းသောအနီရောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအပိုတစ်ခုဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည်။ သို့သော် The Scarlet Witch သည်ပုံနှိပ်ထားသောအနီရောင်ခေါင်းပတ်ပတ်လည်၌ခရမ်းရောင်ကောက်ကြောင်းကိုပြသသောကြောင့်စီးရီး၏အခြားအပိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်မရှိချေ။ Sylvie ကသူမ၏စက်ဝိုင်းပုံကိုဆံပင်ပုံစံခွက်နှစ်ခုထဲသို့ထည့်ရန်ပြသနာမရှိသည့်အခါအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်။
WandaVision minifigures သုံးခုလုံးတွင်ဒုတိယသည် p ၏နောက်ဆုံးတစ်ဝက်ကိုသရုပ်ဖော်သည်articular အတွဲဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်မျှော်လင့်ခဲ့သော Vision ဗားရှင်းမဟုတ်ပါ။ The Vision သည် Infinity Stone အဓိပ္ပာယ်မရှိသဖြင့် Thanos ၏လက်၌သေဆုံးပြီးနောက်ကျန်ရှိသောစူပါဟီးရိုး၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးသောဇာတ်ကောင်၏စာသားကိုဖျော့ဖျော့အတုယူသည်။
The Vision ၏ဤဗားရှင်းသည်တောက်ပသောအရောင်အများစုမရှိသော်လည်း MCU သူရဲကောင်းကိုပိုမိုရင်းနှီးစေသောအရာဖြစ်သည်၊ အသေးစိတ်သည်သာမန်ထက်သေးငယ်သည်ထက်များစွာသာလွန်သည်။ Marvel theme နှင့်ကျန်အပိုင်းများနှင့်လိုက်ဖက်သည် 71031 Marvel စတူဒီယိုမရ။ ပါ ၀ င်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်ခြုံငုံဖော်ပြသောဇာတ်ကြောင်းဆိုင်ရာဆန်းကြယ်မှုအတွက်ချီးကျူးသံတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ပုံသွင်းထားသောခြေထောက်နှစ်ချောင်းနှင့်ခြေလက်အားလုံး ဖြတ်၍ အပြည့်အဝပုံနှိပ်ခြင်း The Vision ၏တစ်ခုတည်းသောထူးခြားချက်မှာ ဦး ခေါင်းဒီဇိုင်းသည်မျက်နှာ၏ဘေးနှစ်ဖက်သို့မဆက်ဘဲ ဦး ခေါင်းနှင့်နောက်ဘက်ကြားသိသိသာသာကွာဟချက်ကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့် p တွင်ကူညီသည်art အဖြူရောင်အုတ်ဖြင့်၎င်းကိုပုံနှိပ်ထားသည်။ ဝန်ခံရလျှင်ဤအရာသည်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Lego အဖွဲ့၏လက်ရှိ minifigure ပြုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်တူညီသော်လည်းပြဿနာသည်ကွက်လပ်မှအရောင်များကိုအောင်မြင်စွာအာရုံလွှဲနိုင်သောစီးရီးရှိအခြား minifigures များကဲ့သို့မပျံ့နှံ့ပါ။
Monica Rambeau သည် Westview မြို့ကိုပိတ်မိပြီးနောက် Wanda ၏ hex ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်တာဝန်ကျခဲ့သော SWORD (Sentient Weapon Observation and Response Division) ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးသောအသေးအဖွဲကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ ကူညီပေးနိုင်သောဆံပင်ပုံစံအသစ်ဖြင့် p ကိုရှာတယ်art စာရင်း နှင့်ဖြစ်နိုင်သောလက်နက်အချို့ အသုံးအချို့ကိုရှာပါ အဝေးတစ်နေရာမှနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုသည်ဤအကြောင်းအရာအပြင်ဘက်ရှိပရိတ်သတ်များအတွက်နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အခြားဇာတ်ကောင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 71031 Marvel စတူဒီယိုသို့သော် Monica Rambeau သည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာမခံစားနိုင်ပါ။ သူမလက်များကိုသုံးနိုင်သည် Star Warsခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသည်သင်၏ရာထူးအဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီနိုင်သည် Lego ဓားရှည်ခံထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကရိုးရိုးသားသားရပ်နေရခြင်း 71031 Marvel စတူဒီယို မှားယွင်းသောအကြောင်းများကြောင့်၎င်းအသေးစားရဟတ်ယာဉ်သည်ပုံနှိပ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုသာချဲ့ထွင်သည်။
ဒီ minifigure ကိုမင်းရဲ့ပိုကျယ်တဲ့ collection မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ Monica ဟာအထင်ကြီးလောက်စရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအားနည်းတဲ့ icon တွေထဲကတစ်ခုဆိုတာသေချာတယ်။ 71031 Marvel စတူဒီယိုမရ။ ဒါပေမယ့် The အနာဂတ်မှာသူမရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ Marvelအတည်ပြုခဲ့သည်၊ ဤအရာသည်သူမအား minifigure ပုံစံဖြင့်ငါတို့နောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
MCU နှင့်ရင်းနှီးသူများသည် James Buchanan 'Bucky' Barnes သည် Captain America: The First Avenger ၌သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ကတည်းကအဖြစ်အပျက်များကိုသိလိမ့်မည်။ The Falcon နှင့် Winter Soldier တို့နှစ် ဦး ၏တစ်ဝက်အဖြစ် Bucky သည် ၁၀၆ နှစ်ရှိစူပါဟီးရိုး၏စစ်မှန်သောအပန်းဖြေမှုနှင့်အတူစီးရီး၌သူ၏နေရာကိုရရှိခဲ့သည်။
Winter Soldier ပွဲစဉ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလတ်များသည် minifigures များထက်သာလွန်သည် Marvel နှစ်ဘက်ခြမ်းခေါင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်ဆုံးရိုက်နှိပ်ထားသော Vibranium လက်တံတို့ပါ ၀ င်သည်။ အပြာရင့်ရောင်သားရေဂျာကင်အင်္ကျီသည်ထုတ်လွှင့်ပြသမှု၌ဇာတ်ကောင်၏ပုံစံနှင့်လိုက်ဖက်ပြီး Captain America: The Winter Soldier ၌သူ၏ဆိုးဝါးသောမိတ်ဆက်မှုသို့ပြန်ခေါ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Bucky ကိုင်ရန်အခြားပစ္စည်းမှာ Captain America's shield ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ Falcon နှင့် The Winter Soldier ၌ John Walker ထံမှဒိုင်းကိုပြန်ယူရန် Bucky ၏အမြဲတစေဆန္ဒရှိသော Easter Egg တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ကိုချဲ့ထွင်ပါ Captain America ကိုကိုးကားစရာများစွာ တလျှောက်လုံး 71031 Marvel စတူဒီယို.
Sam Wilson ရဲ့ Captain America အဖြစ်ပထမဆုံး minifigure အကြောင်းငါတို့ဘာပြောနိုင်လဲ။ ကောင်းပြီ၊ ယခင်တည်ဆောက်ခဲ့သောပုံသွင်းထားသောပုံသဏ္wingsန်နှစ်စင်းကိုအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ပြီးပုံသွင်းထားသောအတောင်ပံများပြီးနောက် Lego Group သည်ယနေ့ထိစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်အသေးစိတ် minifigures များထဲမှဖော်မြူလာကိုပြီးပြည့်စုံပုံရသည်။
MCU နှင့်မရင်းနှီးသူများပင်ဤ minifigure (ကြီးမားသောတောင်ပံအပိုင်းအားပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်အလုပ်တစ်ခု) အတွက်ဂရုပြုသင့်သည်။ Lego ဒီဇိုင်နာများသည် Captain America အားဤဇာတ်ကောင်ဗားရှင်းအသစ်အတွက်သူတို့၏လုံးလုံးလျားလျားရှင်းလင်းပြတ်သားသောမေတ္တာကိုပဲ့တင်ထပ်ပေးခဲ့သည်။ အပြည့်အဝပုံနှိပ်ခြင်းမှနှစ်ထပ်ပုံသွင်းခြင်းမှနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော minifigures ၏ရှုထောင့်တိုင်းသည်အကောင်းဆုံးကိုအလွယ်တကူရရှိနေပါသည် Lego Marvel minifigure မရှိသေးပါဘူး။
Captain America သည် The Vision လုပ်သောပုံနှိပ်သူ၏ကွာဟချက်ကိုခုထိခံစားနေရတုန်းဘဲ၊ Redwing မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၊ အမှတ်တံဆိပ်ဒိုင်းလွှား (စီးရီးအပြည့်စုဆောင်းရန်နှစ်ခုရှိလိမ့်မည်) နှင့်တောက်ပသောအနီရောင်မျက်မှန်များပါ ၀ င်သည်။ လက်ရှိအကန့်အသတ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် Lego အသေးစားပုံသဏ္န်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုတိုပြောရရင် Captain America minifigure အသစ်ကိုရယူပါ။
စာလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့မလုံလောက်တဲ့အခါမှာ Lego ဒီဇိုင်နာများသည်အထူးခြားဆုံးများထဲမှတစ်ခုကိုတွဲစပ်ထားသည် Marvel Loki ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနှင့်အတူဇာတ်ကောင်များ ဒါပေမယ့် Amphibian Asgardian အကြောင်းမပြောခင် Loki မှာပေါ်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်ရဲ့နတ်ဘုရားကိုအာရုံစိုက်ရအောင်။ egocentric ဇာတ်ကောင်သည် MCU သူရဲကောင်းများ၏စုပေါင်းဘက်၌ဆူးဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်၊ သို့သော်သူမပါဘဲရွေ့လျားသွားသောစကြာဝာ၌သူ၏နေရာအားရှာဖွေရန်စွန့်စားမှုတစ်ခုပေါ်တွင်သူအချိန်ဖြုန်းပစ်ခဲ့သည်။
Loki သည်အခြား minifigures များထက်အသေးစိတ်နည်းသည် 71031 Marvel စတူဒီယိုဒါပေမယ့်မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့စီးရီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် (ဇာတ်ကောင်ရဲ့အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ရေပန်းစားလာမှု) ကြောင့်လည်းချီးကျူးစရာကောင်းနေလိမ့်မယ်။ Disneyစာရင်းပေးသွင်းသူ + အဲဒါက၊ Lego အဖွဲ့သည်ဤ minifigure ကိုအောင်မြင်ရန် streaming စီးရီးတစ်ခုတည်းကိုသာမှီခိုအားထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ Time Variance Authority (TVA) ကိုရည်ညွှန်းထားသောအသေးစားအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ဇာတ်ကောင်အားလုံး၌တင်ပြသည်။ ပုံစံခွက်မတ်ခွက်တစ်ခုတောင်ထည့်ပြီးဆက်လုပ်သည် Lego ကြွေကော်ဖီကိုင်ဆောင်သူနှင့်အဖွဲ့၏မှတ်တမ်းကောင်းစွဲလမ်းမှု။
Loki သည်ဤဇာတ်ကောင်အတွက်ဒုတိယဇာတ်ကောင်အဖြစ်ပါ ၀ င်သည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား အထုပ်သည် Throg ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်ရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းကဏ္inမှာဇာတ်ကောင်ကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဒီလောက်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေထည့်ပေးထားတာသေချာတယ်။ Loki မှာပေါ်လာတဲ့ဒီ Froggy ဇာတ်ကောင်ကိုမမှတ်မိဘူးလား။ အဲဒါကြောင့်ပါ သူ၏မြင်ကွင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်သည်ဒါပေမယ့်သူဟာနောက်ပိုင်းမှာလွယ်လွယ်နဲ့လွဲချော်တဲ့ Easter egg အဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။
Sylvie ၏အမှတ်သညာသစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်သော Loki ၏ဤအချိန်ဇယားဗားရှင်းသည်များစွာသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego အုပ်စုကဒီနေရာကိုပထမဆုံးရွေးနိုင်ခဲ့တယ် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Loki ဇာတ်ကြောင်းမှာပိုရင်းနှီးတဲ့နတ်ဘုရားမနဲ့သူမဆက်သွယ်မှုကြောင့် Sylvie သည်ပြပွဲအတွက်ဒုတိယမြောက် minifigure ဖြစ်ရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ 71031 Marvel စတူဒီယို.
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Sylvie သည်အခြားပုံသေးသေးလေးများအကြားတွင်ပုံနှိပ်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့် Monica Rambeau နှင့်ဆင်တူသောပြဿနာကိုခံစားနေရသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကသူမဆံပင်အပိုင်းအစက minifigure ကိုပိုနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပေမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်။ Lego Group မှ မျက်နှာများပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက် Blade of Thanos နှင့် Gamora နှင့်မကျေမနပ်ဖြစ်နေသောအသုံးအနှုန်းများ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Sylvie ကတခြား Loki minifigure နဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့တွဲလုံးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် streaming show မှာသူမရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္representativeကိုနည်းနည်းအသေးစိတ်ကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်။ မင်းဒီ minifigure ကိုမင်းရွေးချင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းက Alligator Loki accessory ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီးသူ့အကြောင်းအသေးစိတ် (နောက်ပိုင်း)
Yondu နှင့်သူ၏ Ravagers ဂိုဏ်းသည် Missouri သို့ခရီးမသွားဘဲ Peter Quill ကိုတွေ့သော်လည်း Wakanda သို့ သွား၍ T'Challa လူငယ်တစ် ဦး ကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့လျှင်ကော။ Black Panther သည်ဤ minifigure တွင် What If မှဇာတ်ကောင်ငါးယောက်တွင်ဤ Lord minifigure တွင် Star-Lord ၏အခန်းကဏ္ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ၌ 71031 Marvel စတူဒီယို.
Peter Quill's Star-Lord သည် minifigures အတော်အတန်ကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Lego Marvel ဦး ထုပ်ပုံစံခွက်အသစ်ပါ ၀ င်သည့် Milano Spaceship Rescue ၌ပထမဆုံးဗားရှင်းအပါအ ၀ င်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည်။ စart T'Challa ၏ဆံပင်ပုံစံသည်လှိုင်းတွန့်အညိုရောင်ဆံပင်များအစားထိပ်မှထွက်လာသည်။ element blasters များသည်ထိုကန ဦး minifigure သို့ပြန်ခေါ်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၎င်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ခြေထောက်များမှတဆင့်သေချာပေါက်များပြားသည်။ စတိုင်လ်ခရမ်းရောင်ဂျာကင်သည် p ဖြစ်သည်artနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းအောက်ခြေတစ်ဝက်၏ပေါင်းစပ်ထားသောရွှေကဲ့သို့မများပါ boostဖွင် Marvel ပရိသတ်များသည်အဓိကအချိန်ပြဇတ်မှ Star-Lord minifigures များအတွက်အနာဂတ်လက်ကျန်ကိုရယူလိုပေမည်။
Captain C အဖြစ်arter ၏ဒုတိယမြောက် minifigure (မှသြာ), ပု စုဆောင်းထားသောအသေးစား iteration သည်ဗားရှင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်ထက်အသေးစိတ်ဖော်ပြသည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper.
ဤ minifigure ၏ရှုထောင့်တိုင်းသည်အနုစိတ်ပုံနှိပ်ထားသောလက်များ၊ ခြေထောက်များနှင့်ကိုယ်ထည်များနှင့်လိုက်ဖက်သောဆံပင်သစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ classic ၁၉၅၀ ခုနှစ်များကမည်သည့်ပုံစံငယ်များအတွက်မဆိုအပြင်၌အသုံး ၀ င်သောစတိုင်ကိုသင်စိတ်ထဲရှိသည်။
မှတ်မိနိုင်သော Union Jack တံဆိပ်များကို minifigure အပြင်အနီရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့်အပြာရောင်တို့ပါ ၀ င်သောကျန်းမာရေးပမာဏနှင့်အတူဤအရာသည် Lego သင်ရချင်သော Collectible Minifigure ကိုအရင်ရယူပါ တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? ရာသီ ၂ (နှင့် Captain C ၏အပြောင်အပျက်အနာဂတ်arter) စတင်သည်။
မင်းမှာနဂါးငွေ့တန်းမှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးအမျိုးသမီးရှိနေတဲ့အခါဘယ်သူက Mad Titan ကိုလိုချင်တာလဲ။ ဒါကဘာဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုလား။ Gamora သည်သူမအဖေ၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာနှင့်ဓားအပြင် intergalactic conqueror ၏အခန်းကဏ္ကိုပါ ၀ င်သည့်အနာဂတ် show တစ်ခုတွင်အနာဂတ်ပြသရန်စီစဉ်ထားသည်။ Infinity Stones အတွက်သူမရဲ့မွေးစားဖခင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသူမမြင်နိုင်သေးလား။
ဒါက 76107 Thanos: Ultimate Battle ကတည်းက Avengers: Endgame (ခဏလေးဆိုပေမယ့်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်) ပထမဆုံး Gamora minifigure အကြောင်းကြားရတာအံ့သြသွားနိုင်တယ်။ ဤအရာသည်လုံလောက်သောအသေးစိတ်ပမာဏနှင့်ဇာတ်ကောင်ကိုပြန်လည်လည်ပတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်စားပြုသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ခြေထောက်များသည်ပုံအသစ်များထုတ်ပေးသော်လည်းမျက်နှာကိုဤ minifigure ၏လိုအင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောရှားပါးသောဇာတ်ကောင်ပါ ၀ င်သောမျက်နှာကို 76021 The Milano Spaceship Rescue မှပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
ဤဇာတ်ကောင်၏ဒီဇိုင်းများသည်လာမည့် 76237 Sanctuary II: Endgame Battle တွင်ပါ ၀ င်သော Thanos minifigure အသစ်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားပြီး Gamora ၏အစိမ်းရောင်အသားကိုပြသသည်။ ဤဇာတ်ကောင်၏တောက်ပသောအရောင်များသည်သူရဲကောင်းများနှင့်သူရဲကောင်းများအကြားကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပေါ်လွင်စေသည် 71031 Marvel စတူဒီယိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသောဓားအသုံးအဆောင်အတွက်ပြင်ဆင်သည်။
ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
ဘယ်အရာအတွက်နောက်ပြောင်မှုဖြစ်နိုင်လဲ Spider-Man နှင့် Doctor Strange ၏အနီးစပ်ဆုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှု Spider-Manအိမ်ပြန်လမ်းမရှိ။ (ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ)၊ Zombie Hunter Spidey သည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးဟုယူဆရသောအမည်သစ်တစ်ခုကိုလက်ခံသည်။
Cloak of Levitation ၏ဟောင်းနွမ်းထည် ၀ တ်ကို ၀ တ်ဆင်ထားသော Peter Parker သည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဆရာဝန်မအောင်မြင်ဟုယူဆရသည့်အလုပ်တစ်ခုကိုရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်အ ၀ တ်အသစ်တစ်ထည်ကိုမိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သော်လည်းထည်၏ပျံ့နှံ့မှုသည်ဤ minifigure တွင်ပါ ၀ င်သောအသေးစိတ်များစွာကိုသင်အထင်ကြီးစေသည်။
ကျနော်တို့ပါတယ် မှတ်တမ်းတင်သွားသည် အဲဒါအကောင်းဆုံးဗားရှင်းပါ Lego Spider-Man ပုံသွင်းခြင်းနှင့်လက်မောင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သော်လည်းဤပုံသေးသေးလေးသည်အပြည့်ဖုံးထားသောခြေထောက်ဒီဇိုင်းများကိုရောနှောပစ်စေသည်။ ၎င်းသည်အဘယ့်ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသေးစိတ် minifigure ရုပ်ပုံများကိုသာကြည့်ရန်လိုသည် Lego Spider-Man အပြင်၌ - MCU ၏မည်သည့်အခန်း၌မဆိုသို့မဟုတ်ကျော်လွန်သောအသွင်အပြင်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
နောက်ဆုံး minifigure တွင် 71031 Marvel စတူဒီယို Captain America ၏နောက်ထပ်ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ငါတို့သည်၎င်းကိုအပြင်ဘက်တွင်လက်ခံရန်အလွန်မဖြစ်နိုင်ပေ စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။ Zombie Captain America သည် the undead version of the super soldier of inspired from the transformed heroes of the line မှအသွင်ပြောင်းထားသောသူရဲကောင်းများဖြစ်သည် Marvel Zombies များသည်ကာတွန်းများကိုပြေးသည်။
ဒါကမင်းရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းသန့်ရှင်းလှပတဲ့ Captain America minifigure မဟုတ်ဘူး၊ Star-Spangled icon တွေအများကြီး (ဦး ထုပ်ရဲ့အတောင်ပံမှာထူးဆန်းတဲ့ချစ်စရာကိုက်တဲ့အမှတ်အသားအပါအ ၀ င်) ပါ ၀ င်ခဲ့တယ်။ ဤအသေးစိတ်သည်အာရုံစိုက်မှုရှိလျှင် What If တွင်တွေ့ရသောဇာတ်ကောင်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ အပြင်အခြားအရာများ Lego ဖုတ်ကောင် minifigures အတူ ဘယ်လောက်ရှားပါးလဲ undead minifigures များဖြစ်လာသည်၊ Zombie Captain America သည်အကြောင်းပြချက်ကောင်းအတွက် ၀ ယ်လိုအားရဖွယ်ရှိသည်။
ဒီ minifigure ရဲ့အသေးစိတ်ကဇာတ်လိုက်ရဲ့ကဏ္ every တိုင်းကို ဦး ထုပ်နောက်ကျောကဖုံးအုပ်ပေးလေ့ရှိပြီး ဦး ထုပ်နောက်ကျောကိုလုံး ၀ ဖုံးနေလိမ့်မယ်။ ဆာလောင်နေသောမျက်နှာအမူအရာကိုပင် ဦး ထုပ်၏ကောက်ကြောင်းများမှတဆင့်ပြီးပြည့်စုံစွာမြင်နိုင်သည် Lego ဒီဇိုင်နာများသည်ဤ minifigure ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 71031 Marvel စတူဒီယို ၎င်းကိုပြုလုပ်သော minifigures များ၏အရည်အသွေးနှင့်ရည်ညွှန်းချက်သည်များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများနှင့်သာတိကျသောအရာများသာဖြစ်သည်။
Vibranium ဒိုင်းများနှင့် SWORD laptop ကဲ့သို့သောပိုမိုကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းအချို့သည်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေသော်လည်း Captain America ၏သတ္ထုအတောင်ပံများကဲ့သို့အခြားအရာများသည်စီးရီး၏အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။artခံစားရလွယ်သော) ပုံပန်းသဏ္ာန်နှင့်ပုံသဏ္န်သေးငယ်ပြီးပုံသဏ္perfectlyန်စုံလင်စွာလိုက်ဖက်သောပုံသဏ္shortာန်မှာတိုတောင်းသည်။
Throg သည်ပုံနှိပ်အငူ၊ ပုံသွင်းထားသော ဦး ထုပ်နှင့်အသေးစား Mjolnir အပါအ ၀ င်အသေးစိတ်အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်များကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ သို့သော်အပိုင်းသစ်တစ်ခုကိုသုံးနေစဉ် Loki ၏တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲမှထောက်ပြထားသောပဲ့ပိုင်းကိုချန်လှပ်ခဲ့သော Alligator Loki အတွက်တူညီသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ် Lego အဖွဲ့သည်အနာဂတ်မွေးကင်းစကလေးမိကျောင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်မျိုးစိတ်ပြန်ပေါ်လာရန်စဉ်းစားသည် CITY 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေးThrog နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦး ထုပ်မရှိခြင်းသည်အခြားနေရာများသို့အသေးစိတ်အချက်အလတ်များနှင့်တိကျမှုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။
အထင်ရှားဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုသည် Tesseract ပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းမှထုတ်လုပ်သောအစောပိုင်းဗားရှင်းအပြီးတစ်လအကြာ Minecraft ခေါင်းကိုလွှတ်လိုက်သည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomperမရ။ ဤအရာသည်အခြားခြားနားချက်တစ်ခုကိုပြသည် Lego ဗိုလ်ကြီးဂarter minifigures များ၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ဤနောက်ဆုံးဗားရှင်းသည် the scale ကိုသရုပ်ဖော်သည် artefact နှင့်အရောင်တောက်သောအပြာရောင်သည် Infinity Stone မှဆင်းသက်လာသောနတ်မင်းကြီးစွမ်းအင်ကိုကိုယ်စားပြုရန်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။
ယခင်ဈေးနှင့်ညီမျှသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား တစ်အုပ်လျှင်£ 3.49 / $ 4.99 / € 3.99 71031 Marvel စတူဒီယို ဝင်ခွင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအရမ်းခံစားရတယ်။ minifigures အချို့သည်အခြားသူများထက်များစွာပိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ သို့သော်တစ်ခုစီတွင်အနည်းဆုံးလုံလောက်သောအသေးစိတ်ပမာဏနှင့်လက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့်ထိုက်တန်သောအစိတ်အပိုင်းသစ်များပါ ၀ င်သည်။
MCU နှင့်မရင်းနှီးသူများသည်ထိုကုန်ကျစရိတ်ကိုမျိုရန်ရုန်းကန်ရသေးသည်၊ သို့သော်ဤပုံသေးများထုတ်ပေးသောပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အာရုံစိုက်ခြင်းတို့သည်အရည်အသွေးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Lego ဒီဇိုင်နာများသည် franchise အပေါ်ရှင်းလင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်။ 71031 Marvel စတူဒီယို အုတ်ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းကိုတိုက်ရိုက်အသနားခံမှာမဟုတ်ပေမယ့်ဇာတ်လမ်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အသေအချာပါပဲ Marvel ယခုအချိန်ထိ Cinematic Universe သည်ဇာတ်ကောင် ၁၂ ကောင်အပြည့်စုဆောင်းထားသောစျေးနှုန်းသည်ထူးခြားသော minifigures အစစ်အမှန်အစုံအတွက်ကျော်လွှားရန်လွယ်ကူသင့်သည်။
နောက်ထပ်ဘာပြောရ ဦး မလဲ 71031 Marvel စတူဒီယို? ခုချိန်မှာမင်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့မျှော်လင့်စောင့်စားခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးစီးရီးရဲ့စီးရီးကိုငါတို့အရမ်းအထင်ကြီးတယ် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစားမရ။ အများအားဖြင့်မျက်မမြင်အိတ်စွပ်ဆောင်ပုဒ်အတွက်သီးသန့်ဖယ်ထားသည့်ဘတ်ဂျက်သည်စီးရီး၏နိမ့်သောနေရာများတွင်ပင်စုံလင်သောတွဲစပ်မှုဖြစ်စေသည်။
စူပါဟီးရိုး franchise ကိုစိတ်မ ၀ င်စားသူများသည် Monica Rambeau နှင့် T'Challa Star-Lord တို့နှင့်အတူစွယ်စုံပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အနည်းဆုံးဤ minifigures အသစ်များကိုအနည်းဆုံးရရန်ဆက်လက် ဦး တည်သင့်သည်။artထို dep တွင် icular standoutsartအမာခံ MCU ပရိတ်သတ်များသည် Captain America, Zombie Hunter Spidey နှင့် Captain C တို့တွင်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်arter ။
စံသတ်မှတ်ချက်များစွာတွင်ရနိုင်သော minifigures များကိုပုံမှန်အမျိုးအစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 71031 Marvel စတူဒီယို ၎င်းသည်ချစ်သောသူများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဇာတ်ကောင်အသစ်များအတွက်အမှတ်ရရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Lego အခင်းအကျင်းသည်အမြဲတမ်းမည်မျှအလားအလာရှိသည်ကိုအမှန်တကယ်ပြသောပုံစံ ဒီမှာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိတယ် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား Series2လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
သငျသညျသောအလုပျကိုထောကျပံ့နိုင်ပါတယ် Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Marvel minifigures များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ - ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
- အမေးအဖြေများ -
LEGO 71031 ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ Marvel စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စတူဒီယိုများ။
ပုံသေးသေးလေးတစ်ခုကနေ 71031 Marvel စတူဒီယို တည်ဆောက်ရန်သင်တစ်မိနစ်ခန့်သာကြာသင့်သည်၊ သို့သော်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလုံးကိုဖမ်းရန်စီစဉ်သူများသည်အသေးစိတ်ဇာတ်ကောင်များတည်ဆောက်ရန်နှင့်အသေးစိတ်နားလည်ရန်နာရီဝက်ခန့်စီစဉ်ရန်လိုလိမ့်မည်။
LEGO 71031 တွင်မည်သည့်ဇာတ်ကောင်များပါသနည်း Marvel စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စတူဒီယိုများ။
71031 Marvel စတူဒီယို အက္ခရာ ၁၂ လုံးပါ ၀ င်သည် Marvel The Scarlet Witch, The Vision, Monica Rambeau, Winter Soldier, Captain America, Loki, Sylvie, T'Challa Star-Lord, Captain C အပါအ ၀ င် Cinematic UniverseartThan, Blade of Thanos, Zombie Hunter Spidey နှင့် Zombie Captain America တို့နှင့်အတူ Gamora
LEGO 71031 တွင် minifigures ဘယ်မှာလဲ Marvel စတူဒီယိုများမှစုဆောင်းနိုင်သော Minifigures များ
အသစ်အဆန်းဖြစ်တဲ့သူတွေ Marvel Cinematic Universe ကကြားရတာ ၀ မ်းသာလိမ့်မယ် 71031 Marvel စတူဒီယို မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့်သောစီးရီးလေးလုံးတွင်ပေါ်ထွက်လာသောဇာတ်ကောင်များကိုသာပြန်လည်ဖန်တီးသည် Disney+WandaVision၊ Falcon နှင့် Winter Soldier, Loki နှင့်ဘာဖြစ်လျှင်…?
LEGO 71031 ဘယ်လောက်လဲ Marvel စတူဒီယိုစုဆောင်းနိုင်သော Minifigure ကုန်ကျစရိတ်။
မကြာသေးမီကသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းကိုလိုက်နာပါ Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး, 71031 Marvel စတူဒီယို £ 12 / $ 3.49 / € 4.99 အတွက်အက္ခရာ ၁၂ လုံးပါ ၀ င်သောကြောင့် ၄ င်းတို့အတွက်စုစုပေါင်း ၄၁.၈၈ / ၅၉.၈၈ / € ၄၇.၈၈ သို့ရောက်ရှိသည်။
← Junkbot ကိုမှတ်မိသလား။ LEGO သည် Junkbot ကိုသတိရသည်
LEGO သည်ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရှောင်ရှားခဲ့သည် classic Star Wars အစုံ →